Paikady mahomby amin'ny firotsahana ara-tsosialy | Martech Zone
Paikady mahomby amin'ny fanentanana ara-tsosialy
Zoma, Desambra 14, 2012 Friday, May 17, 2013 Douglas Karr
Nanoratra momba izany izahay ShortStack taloha sy anio dia nandefa fanamarihana mahafinaritra miaraka amin'ny infographic manampy izy ireo. Azonao atao ve ny maminavina ny fomba tsara indrindra handrisihana ny mpampiasa hamporisika hifandray amin'ny marika na orinasanao? Azonao ilay izy: fifaninanana! Izay ilay ShortStack hita rehefa nanao fanadihadiana tamin'ny mpampiasa 800 mahery izy ireo. (PS: Izay ny rohy ifandraisanay)
Tsy nahagaga anay izany valiny izany - satria hitantsika isan'andro ny fomba hampitomboan'ny fifaninanana ny Fitiavana ary hiteraka aingam-panahy hizara. Ny nahagaga anay dia ny 38% n'ireo mpandray anjara izay nandray anjara tamin'ny fanadihadianay dia mbola tsy nanao fifaninanana velively. Raha ny fanazavana, ny sary dia naka ny toerana faharoa tamin'ny fifaninanana ary ny lohahevitra momba ny rindrina dia nahazo ny fahatelo.
72% amin'ireo mpamaly no mieritreritra an'izany afaka nanao tsaratsara kokoa miaraka amin'ny ezak'izy ireo amin'ny media sosialy
51% no nanandrana sary fifaninanana
Fampiasana 62% tabilao fadin-tseranana hitaona ny mpankafy azy ireo
14% n'ny mpampiasa no mampiasa horonan-tsary ho an'ny fifaninanana
Ny hany hevitro momba ity infographic ity dia ny inoako fa io teny io anjara dia ampiasaina somary malalaka loatra. Tiako ilay teny voataonanao betsaka kokoa. Raha ny fahitako azy, ny fifamofoana dia mitovy amin'ny fanaovana raharaham-barotra, fa tsy ny fahazoana sitraka na fanarahana fotsiny ho toy ny fifanakalozana valisoa.
Mbola zava-dehibe anefa ireo fikarohana ireo! Ny paikady dia afaka mitarika fifamoivoizana sy fahatsiarovan-tena bebe kokoa amin'ny marikao… izay ahafahanao misarika ny mpanatrika na ny vondrom-piarahamonina lavitra kokoa.
Tags: fifaninananamampiditra mpampiasaandraikitraitiavan'ny olonaSary torohaysary fifaninananashorttackmpampiasa
Fanaraha-maso Brandwatch Social Media
Ny mailaka fandaozana harona tonga lafatra